Ny tantaran'i Diego Maradona momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa
Home FAMPIASANA CLASSIC Ny tantaran'i Diego Maradona momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny andriamanitra football iray malaza amin'ny anarana; 'Cosmic Kite'. Ny tantaran-tantaran-tantaran'i Diego Maradona momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy marim-pototra dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Raha tsy misy adieu, aleo manomboka.
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny fahazazana
Diego Armando Maradona dia teraka tamin'ny 30, 1960 tamin'ny faha-XNUMX, tao Villa Fiorito, faritanin'i Buenos Aires, Arzantina niaraka tamin'ny ray aman-dreny, Don Diego (Ray) ary Dalma Salvadora Franco (Reny).
Teraka tamin'ny fahadimy tamin'ireo zaza valo tao amin'ny fianakaviana Katolika Romana izy. Ny anaran'i Maradona voalohany dia niandoha tamin'ny fiteny grika sy hebreo. Midika izany fa mpamatsy iray (haka ny toeran'ny hafa) na mpampianatra. Ny anarany midika dia Armando - midika izany "Lehilahy ao amin'ny tafika."
Maradona dia nihalehibe tao amin'ny trano fonenany maloto saingy akaikin'ny trano fonenan'ny Villa Fiorito. Ny fianakaviany no anisan'ny mahantra indrindra ao an-tanàna satria maro an'isa izy ireo. Don Diego rainy dia mpandrafitra mozika sy orinasa mpamokatra, izay niady ho an'ny lehilahy telo be zotom-po, tovovavy dimy, ary ny Dalma, trano fonenany ao an-trano.
Ny fahantrana anefa dia tsy nahasakana ny fahombiazana. Maradona voalohany no nifandray tamin'ny baolina kitra rehefa nahazo ny baolina baolina baolina voalohany nataony tamin'ny rahalahiny, Beto Zarate. Izany dia nitranga tamin'ny andro fahatelo nahaterahany. Diego Diego dia natory niaraka tamin'ny baolina tao anatin'ny akanjony nandritra ny efa ho ny 6 volana mba hisorohana ny fangalazana. Ity baolina ity dia nalain'ny reniny indraindray izay naniry azy hifantoka amin'ny fianarana amin'ny hafa ho mpahay kaonty matihanina. Tsy fotoana fohy talohan'ny nahatsapany farany ny baolina baolina kitra.
Diego Maradona Tanora Tantara
Nandray fitiavana tamin'ny baolina kitra izy tamin'ny mbola kely. Nianatra nianatra baolina izy tamin'izy sivy taona. Ny fifandraisana voalohany tamin'ny lalao baolina feno dia tonga rehefa nasaina niditra tao amin'ny ekipa namany izy "Onion kely". Raha niaraka tamin'ireo kely tongolo izy, dia nitarika ny ekipany izy mba handresy lalao baolina 140.
Hetsika goavam-be miavaka, fanampiana matanjaka, pasipaoro marina sy tambajotra mahatalanjona no nahatonga an'i Diego Mardona niakatra hatramin'ny ambaratonga tao anatin'ny fotoana fohy nandritra ny fahazazany.
Ny fahaiza-manaony dia nankasitraka ny mpanatrika izay nahatsikaritra azy nahita an'io zazakely kely io nihazakazaka lavitra ireo ankizy marobe faran'izay kely. Tsy naharitra ela talohan'ny famoahana ny gazety baolina kitra iray ny lahatsoratra iray izay nilaza; "Nisy ankizy iray nanana toe-tsaina sy talenta kintana iray", na dia nosoratana aza ny anarany hoe "Caradona".
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
RAY: Teraka tao Esquina, Corrientes i Diego Sr. ary nikarakara mpandeha tamin'ny alalan'ny sambo nandritra ny taona maro izy, izay nitaingina ny ranon'i Arzantina.
Diego Maradona sy Ray
Maro no nihevitra azy ho ilay lehilahy nanamboatra ny nofin'i Diego. Nanao sorona ara-bola lehibe izy teo am-piandohan'ny asan'ny zanany lahy. Niasa nandritra ny ora maro tao amin'ny orinasa iray izy mba hahita ny zanany. Fantany fa zava-dehibe ny maha-zava-dehibe ny zanany lahy amin'ny baolina kitra Arzantina. Izany no nahatonga an'i He sy ny vadiny tsy mba nahalala velively ny lalao.
"Ilay olona izay naniry azy indrindra no nandresy ahy. Nohitsakitsako ny kirarony ary nihevitra aho fa mety hahatratra an'i Pele na raha tsara kokoa izy. Rehefa nandeha ny fotoana dia namela ahy i Pele, " hoy izy.
Ny ra ihany koa dia nanatrika ny andro manan-danja indrindra tamin'ny fiainan'i Maradona, fony izy niova ny tanjona roa tamin'ny fandresen'ny 2-1 an'i Angletera tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany tamin'ny 1986. "Tsy nisy nahita ny tanjona tamin'ny tanany, na dia izaho aza. Nisy fivarotam-bokatra kely toy izany rehefa naveriny teo amboniny izy ireo ary toa nitifitra ny tanany".
Tsy maintsy nijaly koa izy noho ny olana mianjady amin'ny zanany noho ny fiankinan-doha sy ny fahasahiranana ara-pahasalamana, saingy nanohana foana an'i Diego izy "Zanakalahy tena tsara sy manokana".
"Manome fieboeboana tsy mety mivaivay aho, satria zazakely iray nivoaka avy tao anaty fotaka tany, mba hahatsiaro azy izao tontolo izao, tsy voavidy."
Mpinamana akaiky ho an'ny olona rehetra izy Lionel Messi.
Don Diego, rain'ny mpilalao baolina kitra Diego Maradona, dia nodimandry aorian'ny volana maromaro ny hopitaly. Ny tatitra dia nanondro fa niady tamin'ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny fo izy. Ny sary dia 87 taona fony izy maty.
Izy dia nanambady an'i Dalma Salvadora Franco, ary nanana zanaka valo namely azy; Ana, Rita (Kitti), Elsa (Lili), María Rosa (Maria), Raúl (Lalo), Hugo (Turco) ary Claudia (Cali), ary mazava ho azy Diego Armando, "Pelusa".
Ny marina dia holazaina; Tsy misy olon-kafa na zava-nitranga hafa nisy vokany lehibe kokoa noho i Dalma Salvadora Franco, fantatra kokoa amin'ny hoe 'Dona Tota', amin'ny asany sy ny fiainan'ny zanany.
Izany fanajana izany dia fanomezam-boninahitra azo antoka ho an'ilay vehivavy izay mihoatra noho ny olon-kafa niady mba hitazonana ny zanany lahy amin'ny làlana marina, na dia indraindray dia toa asa tsy vita izany.
Sarotra ny mandresy lahatra ny fiantraikan'ny renin'i 'El Diego' amin'ny maha-olona azy amin'izao fotoana izao, na dia tamin'ny taona 35 taloha aza, Maradona mihitsy no nanandrana nanazava matetika ny fahafoizan-tena sy ny ezaka nataon'ity reniny mba hiarovana azy sy ireo sakaizany dimy ao amin'ny tanàna manodidina an'i Villa Fiorito ao Shenos Aires. Ity ny iray amin'ny teny am-pitenenany ho an'ny reniny.
"Tamin'ny taona 13 dia tsapako fa tsy nalahelo velively ny reniko," Nanomboka i Diego, nahatsiaro ny iray amin'ireo ankamantatra ankafiziny momba ny fiarovana ny reniny. "Tsy nanam-bovoka mihitsy izy, fa naniry fotsiny hihinana. Isaky ny mivoaka ny sakafo dia miteny izy hoe 'malahelo ny kiboko'. Lainga izany! Satria tsy ampy ny nandeha. Izany no antony itiavako ny vadiko taloha. "
Ny reniny dia teo ho azy teo amin'ny sehatra rehetra tao amin'ny asany. Nandao ny zanany sisa izy mba hijanona miaraka amin'i Diego. Raha niara-nipetraka taminy izy, dia niady mafy taminy izy tamin'ny fanaraha-maso ny fomba fiainan'ny mpifoka zava-mahadomelina mankany amin'ny ambany indrindra 0. Izy no antony nialan'i Maradona tsy ho tratra noho ny zava-mahadomelina. Nanao ny fahazarana mifoka sigara i Maradona niaraka taminy. Tsy vitan'ny hoe sigara e-sigarette fotsiny izy.
Tena tia ny reniny i Maradona ka afaka manoroka azy, eny fa na dia eo imason'ny vahoaka aza, mba hahatsapany fa tia ny reniny izy. Izany, maro ireo olona no tsy sadaikatra.
Niaraka taminy hatrany am-pandriana izy. Ny renin'i Maradona tao amin'ny reniny dia nandany tsy am-potoana imbetsaka nitsidika hopitaly noho ny olana nateraky ny renirano.
Ny renin'i Arzantina dia nodimandry tamin'ny Asabotsy 19th of November, 2011, andro taorian'ny nidirany hopitaly noho ny tsy fahombiazan'ny voa.
Raul Maradona: Izy no zandriny faralahy Maradona. Nirotsaka tao Arzantina izy Boca Juniors, ao Espaina Granada, ary any Peru Deportivo Municipal; Izy koa dia nilalao tany Japan, Kanada ary Venezuela.
Hugo Hernán Maradona: Rahalahy iray hafa teraka tamin'ny 9th of May 1969. Izy koa dia fantatra amin'ny anarana hoe El Turco. Izy no iray mitovitovy amin'ny an'i Diego, zokiny lahy.
Indray andro izy dia Arzantina Mpanazatra baolina kitra sy mpilalao taloha. Izy dia nilalao toy ny mpilalao baolina kitra ho an'ny klioba any Amerika Atsimo, Eoropa, Japon ary Kanada, ary mpikambana ao amin'ny ekipa nasionalin'i Arzantina U-16.
anabavy Diego Maradona dia manana rahavavy 5 araka izay azonao jerena etsy ambany.
Manana rahavavy bevohoka telo izy ary zandriny roa mirahalahy.
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Diego Maradona dia nandalo ny lalantsara niaraka tamin'i Claudia Villafane, am-pitiavana azy tamin'ny Novambra 7, 1984.
Samy niara-nonina tamin'ny fitiavana sy ny firindrana izy ireo. Nijanona niaraka taminy izy ary nahita azy nandritra ireo taona niainany.
Nahazo vavy roa vavy, Dalma Nerea ary Giannina Dinorah ireo mpivady ireo.
Dalma Maradona dia mpilalao sarimihetsika Arzantina sy mpihira. Teraka tamin'ny 2 tamin'ny volana Aprily, 1987 tany Barrio Norte, Argentina. Nanomboka niasa tao amin'ny sekolim-pahaizana teatra ao Hugo Midón izy. Nanohy ny fianarany tamin'ny Instituto Universitario de Arte izy. Izy no malaza indrindra amin'ny famoahana an'i Sofia ao amin'ny andian-tantara Cebollitas.
Ny zanany faharoa, Giannina Maradona dia teraka tamin'ny 16th of May, 1989. Nampidirina izy Sergio Aguero tao amin'ny 2008 avy amin'i Diego Maradona, ary samy nandeha haingana ny roa tonta. Giannina nanambady Sergio Aguero tamin'ny 2008, ary teraka tao amin'ny 2009 ny zanak'i Benjamin. Nisaraka ny mpivady tao 2013.
Diego Maradona sy ny vadiny Claudia Villafane dia fantatra fa nanambady nandritra ny 15 taona ary nisara-panambadiana tany 2004. Nandritra ny fisaraham-panambadian'izy ireo, dia niaiky izy fa i Diego Sinagra, zanaky ny tsy an'asa, dia milalao baolina any Italie (toy ny tamin'ny fotoana nanoratana).
Nahazo zazalahy iray hafa koa izy, Diego Fernando, tao amin'ny 2013 avy amin'ny mpiara-miasa akaiky aminy Veronica Ojeda.
Hatramin'ny 1980s hatramin'ny 2004, nijanona ho mpidoroka zava-mahadomelina izy, izay niantraika tamin'ny fahasalamany sy ny fahombiazany. Na dia nifindra tany Kiobà aza izy ary nanandrana nanaraka ny drafitry ny fivoaran'ny zava-mahadomelina, dia toa tsy dia tsara loatra ny zava-drehetra satria nijaly tamin'ny aretim-pihobiana goavana izy taorian'ny fanesorana kôkainina tao amin'ny 2004.
Manan-janaka roa i Maradona - ara-dalàna. Tao anaty fihetsika manjavozavo kely manoloana ny maha-ray izy dia niteny indray androany hoe: "Dalma sy Giannina ny zanako ara-dalàna. Ny ambiny dia vokatry ny volako sy ny fahadisoako. "
Niteraka fahatezerana ho an'ny zanany lahy tsy ara-dalàna izany, Diego Sinagra nandritra ny lahatenin'ny mpanao gazety.
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Karohy amin'ny famintinana
Maro no niova taorian'ny lalao tamin'ny The Little Onions. Tamin'ny taona 12 dia nofinidy izy hilalao ho an'i Los Cebollitas. Mbola nankasitrahan'ny mpanatrika ihany ny fahaizany. Tamin'ny taona 15, nahazo vintana izy hanangana ny lahateniny matihanina amin'ny Argentinos Juniors. Nitarika ny Los Cebollitas ho any amin'ny laharana 136-tsy nokasaina izy, mampiseho ny fahaiza-manaony sy ny talentany.
Ny ekipa mpilalao baolina fohy nefa tsy nisy tahotra dia nalaza noho ny fahaizany mamorona tombony ho an'ny tenany sy ny hafa, ny ekipa mpilalao baolina kitra maradona any Arzantina.
Tsy navelan'i Maradona ny fahafahana hitondra ny fianakaviany ho avy amin'ny fahantrana. Izany no nofinofiny ary hitany fa nahavita izany izy.
Ny ankamaroan'ny asany dia lasa mpikambana ao amin'ny ekipam-pirenena Arzantina nahazo ny World Cup 1986. Diego dia lasibatra tsy tapaka ho an'ireo tranga maloto tao amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany 1986 tany Meksika fotsiny dia nisy 53 nanenjika azy. Ny tanjony dia nahitana tanjona roa tsy hay hadinoina nandritra ny fandresena naharesy an'i Angletera: Ny voalohany dia nahazo baiko tsy ara-dalàna tamin'ny tanany havia, izay nolazain'i Maradona tatỳ aoriana fa ny asan'ny "Ny tànan'Andriamanitra".
ny Ny tanjona faharoa dia tsy nitaky fanampiana mihoatra ny natiora, afa-tsy ny fahaiza-manaon'ny hafainganam-pandehanana mandritry ny fanafihan'ny mpiaro hahitana ny haraton'ny harato. Amin'ny ankapobeny, nandray anjara tamin'ny Mondialy efatra i Maradona, ary nanatontosa ny tanjon'ny 34 tao amin'ny 91 tatsinanana ho an'i Arzantina.
Taorian'ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany, dia nafindra tao amin'ny Espace Barcelona FC i Maradona ho an'ny saram-piraketana iraisam-pirenena $ 7.6 tapitrisa. Tao amin'ny 1983, Maradona dia afaka nitazona ny fifantohany ary nitarika ny ekipa handresy ny Copa del Rey sy ny Espaniola Super Cup. Nahazo fahombiazana roa taona nahitana ny tanjona 38 ho an'ny lalao 58. Saingy ny olana ara-java-manahirana niaraka tamin'ny mpiasa sy ny mpilalao dia nanery azy halefa any amin'ny Napoli Italiana ho an'ny fandoavam-bola iraisam-pirenen'ny $ 10.000.000.
Na dia teo aza ny famirapiratany tsy misy famaranana teo amin'ny sehatra, dia nanjary fanta-daza ihany koa ny Maradona ara-pihetseham-po ho toy ny tena mampiady hevitra. Nanjary liana amin'ny kôkainina izy rehefa nilalao tany Espaina tao amin'ny 1980 ary nahazo fampiatoana ny volana 15 taorian'ny fitsapana tsara ho an'ny vatana tao amin'ny 1991. Maradona dia niatrika ny fampiatoana ambony iray hafa telo taona taty aoriana, tamin'ity indray mitoraka ity ho fanandramana tsara ho an'ny ephedrine nandritra ny mondialy.
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -fisotroan-dronono
Nandany ny fahatelony tamin'ny asany i Maradona tany amin'ny tanindrazany, nihena ny fahaizany ara-batana noho ny fandefasana ratra sy ny taona niainana mafy. Nambarany ny fisotroan-dronono ny alin'ny andro nahaterahany tamin'ny 1997.
Nosoratana ho toy ny mpilalao baolina fahatelo ho an'i Arzantina izy, ao ambadiky ny Gabriel Batistuta sy Hernan Crespo.
Ny tantaran'i Diego Maradona momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -Post Playing Life
Ny olana naterak'i Maradona nandritra ny lalao baolina dia nitohy taorian'ny fisotroan-dronono. Tamin'ny july, 1998, Maradona dia nahazo sazy an-tranomaizina efa roa taona sy 10 volana ho an'ny mpanao gazety mitifitra amin'ny basy amin'ny 1994.
Ny tsimok'aretina fanafody dia ratsy indrindra aorian'ny fisotroan-dronono. Maradona dia nampidirina hopitaly noho ny olana ao am-pon'ny 2000 sy 2004. Ny taona 2004 fony izy niditra hopitaly dia tsy maintsy nampiasa fitaovana fanafody izy mba hifoka rivotra tsara.
Nalefa tany amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina iray tao Orogoay taorian'ny fijalian'ny aretim-po. Nangatahin'i Fidel Castro ho any Kiobà, ary mandany ny ankamaroan'ny efa-taona manaraka ao amin'ny firenena.
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Zava-mahadomelina
Taorian'ny fisotroan-dronono, dia nanjary tsy voafehy ny fitsaboana sy ny zava-mahadomelina. Ity fihetsika ity dia nitarika azy tamin'ny lanjan'ny 267 kilao. Mazava ho azy fa olana matavy loatra izany. Maro tamin'izy ireo no nanondro ny kibony "Belly of Budha".
Noho ny fanampian'ny dokotera mpandidy any Cartagena, Kolombia, dia vita ny fandidiana fitsangatsanganana. Ity fandidiana ity dia manampy ilay kintana portaly nandositra 50kg avy amin'ny lanjany 121kg amin'izao fotoana izao. Izany dia nitranga tao amin'ny 2005.
Taorian'ny fandidiana, nisy fanakianana vitsivitsy nipoitra teo anivon'ny vondrom-piarahamonina ara-pahasalamana mikasika ny loza goavana naterany. Ny loza dia tsy ho an'ny marary ihany fa ho an'ny toeram-pitsaboana ihany koa. Diego Maradona dia mety maty nandritra izany dingana izany.
Ankoatra ny mety hampidi-doza, ny sasany dia nankasitraka ny fandidiana ny fahafatesan'i Diego, mpikomy, izay nilaza fa tsy dia nalahelo loatra izy maty nandritra ny dingana.
Ny toetra manosika an'i Diego Armando dia tsy nanampy tamin'ny fihazonana ny sakafony sy ny fikarakarana taorian'ny fandidiana, ka dia naveriny indray ny ampahan'ny lanjany very.
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mpilalao sy Tanjon'ny Century Award
Ny taonarivo vaovao dia tonga, FIFA tamin'ny fahendreny dia nanapa-kevitra ny handraisana mpilalao iray amin'ny lohatenin'ny taonjato.
Fihaonan'ny aterineto notontosain'izy ireo antsoina hoe Maradona no mpilalao ambony indrindra tamin'ny taonjato 20. Fifandirana goavana no nanaraka io fanambarana io.
Araka ny Maradona, "Nifidy ahy ny olona. Ankehitriny dia tiany hizara ny loka amin'i Pele aho. Tsy hizara ny loka amin'ny olon-kafa aho. "
Io no nanombohan'ny vy tamin'ny Pele.
Ankoatra izany, nifidy ny tanjona faharoa nataon'i Maradona ho an'i Angletera "Tanjona amin'ny taonjato" ao amin'ny fanadihadiana 2002 an-tserasera notarihan'ny FIFA. Nahazo ny baolina tamin'ny antsasany izy ary nidradradradra ny mpilalao Anglisy dimy tamin'ny 11 izay nikitika, nanarona mihoatra ny antsasaky ny tany mba hahazoana ny tanjona.
Ho fanomezam-boninahitra ny fahaiza-manaony sy ny fahatsarany, nanangana sarivongan-dalany azy ny manampahefana ao amin'ny kianja "Tanjona amin'ny taonjato" ary napetraka teo amin'ny fidirana amin'ny kianja.
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -The Coach Argentine
Tao amin'ny 2008, Maradona dia nokaramaina mba hampiofana ny ekipam-pirenen'i Arzantina.
Na dia nirehareha ho an'ny ekipa mahay manoloana an'i Lionel Messi ny ekipa Argentine, angamba ny mpilalao mahay indrindra eran-tany, dia noroahina avy amin'ny World Cup 2010 izy ireo tamin'ny 4-0 nipaoka an'i Alemana tamin'ny faran'ny fifaninanana, ary tsy navaozina ny fifanarahana Maradona.
Na dia teo aza ny fahadisoan'ny vahoaka, Maradona dia mbola malala indrindra any Arzantina amin'ny maha-zanakalahy teratany azy izay nitsangana tamin'ny fanomboham-panetren-tena mba hahatratra ny tendron-tsoratry ny fankahalana iraisam-pirenena.
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tatoo
Diego Maradona ankehitriny dia misy dimy tatoazy, anisan'izany ny anaran'ny zanany roa vavy "Gianinna sy Dalma" amin'ny tarehiny tsirairay. Diego dia manana dragona tatoazy eo amin'ny tongony havia araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Diego Maradona Manana tatoazy ihany koa ilay olo-malaza Marxista Arzantina revolisionera, Che Guevara, eo amin'ny sandriny ankavanana. Diego dia nolazaina ho niteny "Mitondra azy amin'ny tanako sy ao am-poko aho. Nianatra ny tantarany aho, nianatra nitiavana azy. Heveriko fa fantatro ny marina momba azy. "
Ankoatra izany, eo amin'ny tongony havia dia sary famantarana ny praiminisitra taloha tao Kiobà, Fidel Castro. Hoy i Diego "Ny fivoriana dia tahaka ny nikasika ny lanitra tamin'ny tanako. Ny zavatra nataony ho ahy dia tsy azo ekena. Miaraka amin'Andriamanitra izy, izany no antony ahavelomako. "
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -anaram-bosotra
Diego Maradona dia voaravaka tamin'ny anaram-bosotra nandritra ny asany nalaza, fa ny tena izy indrindra "Barrilete Cósmico" amin'ny teny anglisy, "Cosmic Kite ". Nomena azy ny fanamarihana malaza tamin'ny radio Uruguay Victor Hugo Morales ary noheverin'ny fanjakana Arzantina voalohany tany 1986 izy, taorian'ny nahavitany izany tanjona izany tamin'i Angletera. "Cosmic Kite. Avy aiza ny planeta? " Nikiakiaka izy. Taona maro taty aoriana dia nilaza ilay mpivaofy teny fa nino izy fa tsy dia ambony loatra ny fisalasalan'i Maradona fa tokony ho toy ny fanenjehana ny rivotra amin'ny rivotra ny mpanohitra.
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fitiavana sy fankahalana an'i Napoli
Diego Maradona no malaza indrindra tamin'ny fotoanany tao Napoli. Tonga tany Napoli taorian'ny nahazoany tombony tamin'ny filohan'ny klioba FC Bercelona Jose P. Liuis Nunez izy. Nafindra tany amin'ny $ 10.48 tapitrisa izy. Maradona no hany mpilalao ao amin'ny tantaran'ny baolina kitra izay nahazoana dina fandrakofam-peo manerantany.
Raha vao tonga izy dia noraisin'ny mpankafy 75,000 i Maradona rehefa natolotra tamin'ny Jolay 5, 1984 ho toy ny Napoli Player. Ny fahatongavan'izy ireo dia nanantena ireo mpankafy ary nino fa tonga ilay mpamonjy.
Izy dia nanandratra ny klioba ho amin'ny haavom-baovao amin'ny androm-piainany ary i Napoli dia nahazo ny ekipa Italiana Fiara Italiana tamin'ny 1986-87. Ny mpankafy an'i Maradona sy ny fankalazana dia nitondra ny famantaranandro nandritra ny herinandro.
Izy dia nanampy an'i Napoli handresy an'i Copa Italia amin'ny 1987, ny UEFA amin'ny 1989 sy ny Supercup italiana ao 1990 ankoatra ny ekipa Serie A. Maro ireo zaza teraka teraka no nomena anarana 'Maradona'amin'ny voninahiny any Italia.
Nanomboka ny olana atrehany tao Napoli rehefa nanomboka nandia lalao sy nisotro rongony izy. Voalohany, nandoa vola $ 70,000 tamin'ny alalan'ny fikambanany izy noho ny lalao sy ny fampihomehezana noho ny fihenjanana. Nitohy ny fampiasana kôkaina ary nifandraisany tamin'i Camorra, ny fikambanana mpanao heloka bevava.
Nandrara ny fandrarana ny volana 15 izy noho ny tsy nahitana fitsaboana zava-mahadomelina ho an'ny cocaine ary navoakan'i Napoli tao amin'ny 1992. Ho fanomezam-boninahitra azy sy ny zava-bitany dia napetrak'i Napoli ny orinasany No. 10.
Maradona amin'ny 1996: "Izaho dia izaho sy izaho foana ho mpidoroka zava-mahadomelina. Ny olona mandray anjara amin'ny zava-mahadomelina dia mila miady aminy isan'andro. "
Navelany handoa vola kely ho an'ny mpandoa hetra Italiana i Napoli. Nilaza ireo mpiasam-panjakana tao amin'ny 2009 fa ny maradona dia tokony hahazo € 37 tapitrisa. Na izany aza, mihoatra ny antsasak'izany no mahaliana ny trosa voalohany.
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny baolina kitra baolina kitra
Nalain'ny Rivelino sy George Best any Irlandy Avaratra izy rehefa nipoitra.
Diego Maradona dia nankasitraka ny herim-pony, ny zava-bitany niavaka sy ny toetra mendri-kaja.
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny mpandinika an'Andriamanitra
Ali Bin Nasser no mpitsara izay nanolotra ny lalao ary naneno ny sifotra rehefa nosoratan'i Maradona ilay izy "Ny tanjon'Andriamanitra". Maradona taorian'ny taona 29 dia nitsidika an'i Ali Bin Nasser.
Ity fitsidihana mahaliana ity dia nitranga tamin'ny Aogositra 17, 2015. Nandeha nankany Tunisa ny Maradona ary nanolotra fankasitrahana tamin'ny maherifon-dry zareo mpilalao matihanina ary nanolotra marika Argentine ho azy.
Ali Bin Nasser izay nijoro nitazona ny baolina tao amin'ny sary etsy ambany.
Miaraha aminy 'namana mandrakizay' ary nanome azy sarimihetsika arzantina nampiavaka azy ho azy.
Diego Maradona dia nanoroka sy namihina ilay lehilahy tao am-pony.Nitsiky izy ireo taorian'ireo taona 29. Niteraka tsikera mavesatra teo amin'ireo mpitsoa-ponenana sy mpanohana ny baolina kitra any Angletera izany. Nitsambikina tampoka ny fankahalana izay niseho ho nanalefaka ny roa tonta.
Mpitondra ny mpitsara mpilatsaka an-tsitrapo - tantaram-pitiavana an'i Ali Bin Nasser
Ny mpitsikilo Toniziana Ali Bin Nasser dia nanontany ny antony nanaovany izany fa ny fanapahan-keviny handraisana ny tanjona dia voatarik'i Dochev, ilay mpandroba.
"Niandry an'i Dochev aho mba hanome ahy tsipika izay tena nitranga fa tsy nanamarika ny handball," Hoy i Bin Nasser. Na dia niezaka nampita ny fankahalana azy aza izy ireo dia samy nizara izany.
Ny tantaran'i Diego Maradona momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -Liàn'Andriamanitra Linesman
Voalohany, ny Linesman, Boligara iray izay tsy nahavita nitatitra ny tanjon'i Hand Marine's God of God dia maty. Maty tamin'ny taona 80 izy. Bogdan Dochev dia nandany fotoana vitsy tamin'ny androm-piainany noho ny antony tsy mbola nahitany ny tàn'i Maradona tanjon'Andriamanitra tamin'ny World Cup 1986.
Hoy i Bogdan Dotchev momba ilay raharaha: "Na dia tsapako avy hatrany aza fa nisy zavatra tsy ara-dalàna, dia tamin'izany fotoana i Fifa dia tsy namela ireo mpanampy hiresaka momba ny fanapahan-kevitra amin'ny mpitsara. Raha nametraka mpitsoa-ponenana avy any Eoropa i Fifa noho ny lalao toy izany, dia tsy nekena ny tanjon'i Maradona. "
Hoy izy teo aloha: "Nanimba ny fiainako i Diego Maradona. Mpilalao baolina mahay izy fa lehilahy madinika sy adala. Izy dia ambany sy ambany ary fahendrena. Ny torolalana Fifa nanome anay talohan'ny lalao mazava - raha ny mpiara-miasa iray dia tsara kokoa noho ny ahy, tokony hanaja ny fomba fijeriny aho. "
Ny tànan'Andriamanitra Linesman- Ilay tantara tsy fantatra momba an'i Bogdan Dotchev
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mifandray amin'i Gadaffi
Tao amin'ny 2003, Maradona dia voatendry ho mpanolotsaina ara-teknika an'i Al-Saadi, zanaka fahatelo ao Muammer Gaddafi. Al-Saadi tamin'io fotoana io dia nilalao tao amin'ny Serie A ho an'i Perugia Calcio.
Ny Link to Maradona miaraka amin'ny tantaram-pianakavian'i Gadaffi - tsy fantatra
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Church of Maradona
Ao amin'ny fiarahamonintsika amin'izao fotoana izao dia mahita atleta ho sampy isika ary mametraka azy ireo eo am-baravarankely ho an'izao tontolo izao hijery. Moa ve mendrika ny toeran'ny andriamanitra iray izy ireo? Izy ireo dia tena ao amin'ny ambaratonga ambony ny zavatra ataon'izy ireo, fa hanompo azy ireo? Izany dia eo amin'ny ambaratonga vaovao.
Fantatrao ve? .. Nanomboka ny mpankafy ny Argentine "Church of Maradona" ao Buenos Aires amin'ny 1998.
Ny Fiangonana Maradona dia mandray izany fanohanana izany amin'ny ambaratonga vaovao. Ireo mpanaraka an'io fiorenana io dia manompo ara-bakiteny ity lehilahy ity "Araka an'Andriamanitra" tongony havia izay asehony rehefa manitsaka ny loha izy. Miaraka amin'ny mpanaraka ny 120,000, ny Fiangonana Maradona dia manompo an'i Diego Maradona, izay efa misotro ronono any Arzantina, ho andriamanitra. Ireo mpanaraka azy ireo dia namorona ny Tenin'ny Tenany mihitsy aza, ny vavaky ny Tompo, ary na dia ny soratra ara-pivavahana manokana aza.
Church of Maradona Age
Manana ny vavaky ny Tompo ihany koa ireo mpanaraka!
"Ny rainay havaozinareo, izay eto an-tany, no nohamasinina ho anareo, ny masonao tonga, tadidin'izy ireo ny tanjona."
Ny mpanaraka ny fiangonana dia miaina amin'ny Andriamaniny Diego. Ny fiainany dia azy ireo. Ny fotoan-tsarotra niatrehany ny fidorohana zava-mahadomelina dia nisy fiantraikany tamin'ny mpanaraka azy. Niova mihitsy aza izy ireo tamin'ny taona lasa mba hihaona tamin'ny nahaterahan'i Diego malalany. Ohatra, ny taona 2016 ao amin'ny Church of Maradona dia 56 AD (After Diego). Mankalaza ny fitsingerenan'ny Andriamaniny Diego izy ireo amin'ny endrika fankalazana ny Krismasy.
Fiangonana ao amin'ny efitranon'ny mpikambana Maradona
Manamboatra ny hazo sy ny trano fonenany izy ireo miaraka amin'ny lohahevitr'i Maradona sy ny lokon'ny loko Arzantina. Ny Fiangonana koa dia manana fitsipika folo nomena ny mpikambana tsirairay mba hanaraka ny lova navelan'ny fikambanana.
Ireto ambany ireto ny Didy Folo Maradona;
Tsy maintsy manana Fiangonana Maradona Alter ianao ao an-tranonao
Church of Age Maradona
Fitiavana ny baolina ambonin'ny zava-drehetra
Ambarao ny fitiavana tsy misy fepetra an'i Diego sy ny hatsaran'ny baolina kitra
Arovy ny lobaka Arzantina
Ampielezo ny vaovao momba ireo fahagagana nataon'i Diego
Hajao ny tempoly izay nilalaovany sy ny akanjony masina
Aza manambara an'i Diego ho mpikambana ao amin'ny ekipa tokana
Torio ary ampielezo ny fitsipiky ny fiangonana
Make Diego ny anaranao antenantenany
Lazao ny zanakao voalohany Diego
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ady amin'ny teny manohitra ny Pele
Tao anatin'ny adin'ny teny mitohy dia nisy teo anelanelan'i Maradona sy hoditra Hatramin'ny nisian'ny mpilalao maradona tamin'ny taona lasa teo. Ireto manaraka ireto dia teny miady izay nisy teo anelanelan'izy ireo.
Hoy i Pele nandritra ny fitondran'i Maradona tamin'ny naha-ekipa nasionaly azy: "Tsy fahadisoan'i Maradona anefa izany. Izany no fahadisoan'izay rehetra mitana azy. "Niverina ny Argentine taorian'io, ary nilaza hoe: "Tokony hiverina any amin'ny tranom-bakoka i Pele. Ary mijanòna any. "
Diego Maradona Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Famelezana ireo mpitsikera
Taorian'ny nanapotehana ny fakantsarin'ny fakantsary noho ny fisalasalana, hoy i Diego "Nataoko izany noho ny antony fisainana."
Narovan'i Maradona mazava tsara tamin'i Lionel Messi ny fanakianana azy. Tamin'ny Jolay 2, 2010, rehefa nilaza izy hoe: "Na iza na iza milaza fa tsy manana World Cup lehibe dia adala."
World Cup 2010- Na dia teo aza izany faharesena mahatsiravina izany dia nahatratra ny fifaninanana ny ekipa. Ho an'ny mpitsikera azy dia nilaza i Maradona. "To ireo izay tsy nino: ankehitriny s ** k d ** k - masiaka vehivavy aho noho ny teniko - ary tandremo hatrany izany. Izaho dia fotsy na mainty. Tsy dia faly loatra tamin'ny FIFA ny fisarahana. Nandripaka azy roa volana izy ireo.
FIFA Attack- Noraisin'i Maradona tamin'ny valifaty tamin'ny FIFA ny valim-pitenenany rehefa nitaraina izy momba ny baolina vaovao tokony hampiasaina amin'ny fifaninanana World Cup 2010 any Afrika Atsimo. Hoy izy- "Azoko anontaniana ireo tale FIFA aho hanakana ahy hiresaka momba ahy sy hanomboka amin'ny fananana baolina kitra tena izy. Tsy misy ilàna azy ity baolina ity. Tsy azo atao ny mifehy. "
World Cup 1998- Niverina tany 1998 izy, momba ny Fiadiana ny amboara eran-tany tamin'ity taona ity. "Nahazo tongotra efatra ny mpilalao. Toy ny robocops izy ireo, mila milina maivana kokoa noho ny fanasitranana. Tsy mino aho fa mety ho ratsy kokoa ny fifaninanana. "
Roberto Carlos Childhood Tantara Mitantara ny momba ny tantaram-piainana
Ny tantaram-pitiavana tantanin'i Robinho Plus momba ny tantaram-pahaterahana
Andrea Pirlo Tantara Mitantara Momba ny Tantaram-pahagagana